Shiinaha High Precision Xinling offline/desktop AOI XLIN-VT-AOI60 ee kormeerka iyo koontaroolka badan ee soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha SMT/DIP |Xinling
• Mashiin-mashiin fudud oo dareen leh, oo la jaan qaadaya caadooyinka hawlgalka fudud ee waxtarka leh ee maalinlaha ah.
• Kaamirada dhijitaalka ah ee midabka leh ee saxda ah, tayada sare leh, shaqada xasiloonida sare si loo sawiro sawirada, soo celinta sawirada dhabta ah iyo kuwa dabiiciga ah, oo lagu gaaro wax soo saarka tayada sare leh.Aragti ahaan, waxaan dooran karnaa kamarado aan xadidneyn.
Muraayadaha telecentric (standard) xallinta sare, qoto dheer oo qoto dheer oo duurka ah, qalloocan aadka u hooseeya iyo naqshadaynta iftiinka isbarbardhigga ah, iwm., waxay si cad u sawiri kartaa leexinta guddiga wareegga iyo qaybaha dhaadheer iyada oo aan jeexjeexin.
• Software dhamaystiran oo dabacsan, shuruudaha tababarka ugu yar, fududahay in la isticmaalo.
• Saaxir socodka shaqada si uu habayntu joogto ugu ahaado.
• Naqshadeynta albaabka silitaanka ee habboon ayaa ka dhigaysa dayactirka mid ku habboon.
• Naqshadaynta cabbirka weyn ee ogaanshaha, kaas oo buuxin kara shuruudaha ogaanshaha ee PCB-yada kala duwan.
• Waxaa loo isticmaali karaa OK/NG-da labanlaabka ah ee isku xirka guddiga isku xirka si aad si dhab ah u ogaatid xiriirka aan fiicnayn ee imtixaanka online-ka ah, helitaanka guddiga iyo dayactirka, iyo taageeridda xiriirka tooska ah ee qalabka hore iyo gadaal ee khadka wax soo saarka (nooca online).
• Naqshadeynta barnaamijka khadka-ka-baxsan iyo ku-dhaqanka shaqada khalad-inta khadka-ka-baxsan si loo kordhiyo isticmaalka qalabka.
Codsi dhammaystiran oo kala duwan oo algorithms ah oo wax ku ool ah, codsiga software waa dabacsanaan badan.
Isticmaalka terminaalka mobaylada ee hoos yimaada shabkada bilaa-waayirka ah waxay samayn kartaa goobo shaqo goob kasta oo aqoon-is-weydaarsiga ah, iyada oo la qaadanayo hal-ilaa-badan, iyo xaqiijinta xogta mashiinnada badan ee internetka iyada oo loo marayo goobta shaqada dayactirka si loo gaaro ujeedada badbaadinta shaqaalaha.Waxay si sax ah u soo jeedin kartaa magaca cilladda saxda ah, waxaana taageeraya nidaamka xogta SQL oo dhammaystiran.Waxay bixisaa nidaamka falanqaynta tirakoobka SPC qaab jaantusyada pie iyo histograms, taas oo ku haboon macaamiisha si ay u sameeyaan falanqaynta habka iyo horumarinta tayada.
Algorithms-yada jawaabta gaarka ah sida aqoonsiga jilaha OCR iyo tijaabinta dariiqa ayaa si wax ku ool ah ula kulmi kara kormeerka tayada daabacaadda ka dib, iyo heerka ogaanshaha iyo heerka gudbinta ayaa sarreeya.
• Nidaamka xakamaynta garaadka sare, la socodka wakhtiga dhabta ah ee heerka tayada badeecada iyo jawaab celinta wakhtiga.
• Xaqiiji isku xidhka tooska ah ee heerarka qaybaha iyada oo loo marayo CAD, ama mashiinka meelaynta si aad u soo dejiso xogta isku xidhka si loo xaqiijiyo otomaatignimada naqshadaynta barnaamijka.
Habka ogaanshaha waxa ku lug leh 26 algorithms sida barasho qoto dheer, falanqaynta vector, xisaabinta midabka, soo saarista midabka, xisaabinta miisaanka, isbarbardhigga sawirka, OCV/OCR, iwm. , Aqoonsiga koodhka QR, aqoonsiga jilaha, xaqiijinta jilaha, aqoonsiga qiimaha iska caabinta, ogaanshaha goobada, ogaanshaha polarity, ogaanshaha xoqan, ogaanshaha buundada, celceliska qiimaha, qiimaha ugu badan, qiimaha ugu yar, qiimaha kala duwan, qiimaha celceliska maxaliga ah, saarista dhalaalka, qaraabo dhimis, 2 Ogaanshaha xagasha dhamaadka, ogaanshaha collinearity, jiilka qayb-hoosaadka, qiimaha la xisaabiyay, ogaanshaha guddiga oo dhan [+], ogaanshaha guddiga oo dhan [-], meelaynta hal dhinac).
Cabbirka PCB Min: 50*50mm;ugu badnaan: 450 * 350mm;waxaa loo habeyn karaa codsiyada gaarka ah.
PCB sare iyo kan hoose oo dhererkiisu cad yahay: Sare: 30mm, Hoose: 70mm.La hagaajin karo, waxaa loo habeyn karaa codsiyada gaarka ah.
Dhererka dhulka PCB 780 ilaa 820 mm
Matoorka X/Y-ga Buugga-qaadista iyo meel-marinta, boodhka saxda ah ee kaxaynta, Matoorka Y servo si uu u dhaqaajiyo PCB-ga, matoorka X-servo si uu u kaxeeyo kamaradda si uu sawirro uga qaado.
Korontada AC220V 50/60Hz 1.0 KW
Looma baahna cadaadiska hawada
Qalabka hore iyo kan dambe ee isgaarsiinta Smema ikhtiyaari ah
Miisaanka qalabka qiyaastii 350KG
Cabirka qalabka L900 (bidix iyo midig) * W1000 (hore iyo gadaal) * H1500 mm
Hore: Naqshad Cusub oo Fashion ah oo loogu talagalay daabacaha tooska ah ee Smd Led - NDT X-ray Inspection Machine for PCB Prototype iyo SMT Assembly - Xinling
Xiga: Dual-Track Online Mashiinka XLIN-VL-AOI68 AOI ee Kormeerka Badan iyo Goobaha Xakamaynta ee SMT/DIP
Kontoroolka moduleka cusub ee ASM SMT SIPLACE TX ...